Faritra Alaotra Mangoro : Fanomezan-tanana no tena zava-dehibe fa tsy ny fitaomana olona an-dalambe -
AccueilSongandinaFaritra Alaotra Mangoro : Fanomezan-tanana no tena zava-dehibe fa tsy ny fitaomana olona an-dalambe
Naneho ny heviny momba ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny i Oliver Randriamahaleomanana , teknisianina avy ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro, izay efa nisehatra tamin’ny « Projet de Réhabilitation du Périmètre Bas Mangoky (PRBM), Programme National Bassins Versants Périmètres Irrigués »(PNBVPI) sy ny maro . Samia manao ny asany, ary aza terena hanaraka anao hitokona ny olona te hiasa. Hitarika olona hidina an-dalambe ve no nifidianan’ny mponina ireo depiote 73 ireo ?, hoy izy. “Misarika ny sain’ny vahoaka sy ny mpiasam-panjakana ny tenako , inona no nanaovana fifanarahana arak’asa tamin’ny fanjakana ? Hitokona eny an-dalambe ve ? Avelao samy hanao ny asany ny rehetra, raha solombavabahoaka ianao dia ataovy ny asa mifandraika amin’izany raha mpitandro filaminana ianao dia ataovy ny asa mifanaraka amin’izany ”, hoy ny fanazavany. Olona ara-politika no misy ankehitriny, adidin’ny mpanao politika no mamaha sy mitady vahaolana amin’izany. Tsy misy vahaolana afa- tsy ny fifanatonana sy ny fifampiresahana ihany. Aoka ny vahoaka tsy hatao fitaovana sy hatao sorona entina amin’ny olana ara-politika. Ny mahamaika ny mponina dia ny fampandrosoanana sy ny filaminana ahafahany miasa sy miavotra eo amin’ny fiainany. Raha izao vanim-potoana iainatsika izao no mbola hisy krizy vaovao dia tsy ho zaka intsony. Tokony hanolo-tanana ny Filoham-pirenena amin’izao toe-java-misy ankehitriny izao ny teknisiana rehetra mba tsy ho very anjavony ny fampandrosoana efa napetraka.
Mazava. Saika ao anatin’ny fifidianana federaly avokoa ireo federasiona olympika amin’izao fotoana izao. Efa nisy ireo nahatanteraka ny fifidianana teo anivon’ny federasiona misy azy saingy, mbola ao koa ireo malaindaina sy marefo hanatanteraka izany. Ho ...Tohiny